Ọhụrụ Safer Tourism Akara bụ igodo iji mee ka ndị ọbịa laghachi
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ọhụrụ Safer Tourism Akara bụ igodo iji mee ka ndị ọbịa laghachi
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Education • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • LGBTQ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Nchekwa njem nlegharị anya
Ọ dị mfe, dị irè, na pụrụ iche. Ntughari nke Mmemme Njem Nleta Safer Safer site na World Tourism Network. WTN nwere olile anya maka Nchekwa njem nleta nke Safer ka ọ bụrụ ọkọlọtọ ọhụụ ụwa zuru oke n'ịchọta ebe, ụlọ oriri na ọ hotelụ ,ụ na ndị ọzọ nwere oke nchekwa maka ndị ọbịa.
Ihe omuma ihe ncheta njem nleta ohuru nke World Tourism Network weghachitere na July 1. Emechiri Mmemme na Jenụwarị iji mụọ iyi egwu COVID-19 maka njem na njem.
Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ, na ọbara ọbara nke Safer na-egosipụta ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi, ihe nlele chọrọ na ọnụego ikpe. O nwere ngwa ọrụ niile dị mfe iji bụrụ ọkọlọtọ ọhụrụ maka mba ụwa. Emere ya iji weghachite azụmaahịa ma nweta obi ike nke ndị njem, ebe na ndị ọrụ.
Nchekwa Njem Nleta Ahụhụ Maka Nchebe maka ebe na ndị metụtara ya dị ugbu a maka ndị otu nke World Tourism Network, nzukọ na-ewughachi njem, na-eme ka mkparịta ụka zuru ụwa ọnụ nke mbụ gbasara COVID-19 na ndị njem na ndị njem na ndị njem.
Nchekwa njem na nchekwa na-adabere ma onye na-eweta ma onye nnata, ọ na-ewekwa onye ndu. N'ịghọta eziokwu a, Iwughachi njem bụ mkparịta ụka mbụ zuru ụwa ọnụ gbasara egwu nke COVID-19.
E guzobere ya site eTurboNews, Njem Nleta Dị Mma, PATA, na Ndị njem nlegharị anya nke Africa, Na Allọ Ọrụ Njem Nleta Nepal na sideline nke kagbuo ITB Trade show na Berlin na March 8, 2020. ITB emeghi ebe, ma iwughachi njem nri ụtụtụ bụ mmalite nke ihe karịrị 200 + mkparịta ụka mbugharị na ndị nwere nketa gburugburu ụwa.
Dr. Peter Tarlow ma ọ bụ Safer Tourism dọrọ aka ná ntị banyere nsogbu COVID-19 na-apụta na mmemme mmemme Safer Travel na ozi vidio edere na February 2020.
Na Disemba nke 2020, Iwughari. Trevel kee ihe Okwu Njem Nleta Okwu (WTN), nzukọ ịkparịta ụka n'networkntanet na ihe dị ka otu puku mmadụ na narị ise na-ahụ maka njem na njem na mba 1,500.
WTN kere Nchekwa njem nlegharị anya maka njem na njem na njem ndị njem metụtara na July nke 2020. The Jamaica Tourism Board bụ ebe mbụ nyere akara na July 9, 2020, na Kenya Kenya Tourism Board.
Mgbe ole WTTC mara ọkwa ihe karịrị otu narị ebe natara stampụ ahụ nchekwa nchekwa njem, World Tourism Network kpebiri mgbe e guzobere ya itinye Nchekwa njem nlegharị anya jidesie ike iji kwe ka nghọta doro anya nke COVID-19 na iyi egwu ndị ọbịa na ụlọ ọrụ ndị njem.
Site na iwebata usoro ịgba ọgwụ mgbochi, yana ndekọ njem nlegharị na-apụta na nnukwu ahịa gụnyere Hawaii, World Tourism Network kpebiri ịmaliteghachi Safer Tourism Seal ọzọ na July 1, 2021, otu afọ mgbe emechara ya.
Onye isi oche na onye nchoputa WTN Juergen Steinmetz kwuru, sị: “Ọ dị mkpa ka anyị mepụta mmemme nwere ike inweta obi ike maka onye njem ahụ, ebe njedebe ya, ndị metụtara ya, na ndị were ọrụ na mpaghara ụwa a.
“Anyị enweghị recourses iji nweta zuru ezu nnwale. Echere m na WTTC Stamp rụrụ nnukwu ọrụ na ijikọta data zuru ezu ma nwee ndị na-ejide akara na-enyocha ihe iwu ha maka ebe ha na-aga ma ọ bụ ụlọ ọrụ ha, ka ha wee nweta nkwenye WTTC. Anyị weere usoro ihe omume njem njem nke Hawaii dị ka ihe nlere, ozi anyị dịkwa mfe. Vgba ọgwụ mgbochi ọrịa, nyocha, na mgbasa nke nje a bụ ọnụọgụ ndị anyị nwere ike ịlele tupu anyị enyefe akara Njem Nleta Njem Nleta Anyị.
”Akara WTTC na akara WTN na-aja ibe ha mma. O doro anya, ụlọ ọrụ ọ bụla ruru eru inweta akara anyị kwesịrị itinye maka stampụ WTTC nke abụọ. Ebe ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ebu akara WTTC nwere ike ịchọrọ itinye maka akara anyị ọzọ. Ozi WTTC dabere na nkọwa nke azụmahịa ma ọ bụ ebe ọ na-aga, anyị na-elekwasị anya naanị na steeti dị ugbu a na nsonaazụ.
“Ọ ga-eme ka a hụ ihe ndị dị mkpa iji rụọ ọrụ na ebe nchekwa dị ugbu a, tupu ị rụọ ọrụ na nkọwapụta na obere ebipụta.
“Anyị ga-enwe obi ike na onye ọ bụla nke na-anara akara anyị ga-enwe ike itolite njem nlegharị site ugbu a gawa. Nwere ike ịnweta nkọwa niile gbasara ọrụ nkwari akụ na ebe, mana mgbe ebe ị na-erubeghị nchekwa, ihe a niile enweghị isi.
“Site na njem njem kwa ụbọchị na Hawaii, nke ahụ dị elu ma e jiri ya tụnyere ụbọchị kachasị elu na 2019, ọ bụ ezie na enweghị njem mba ụwa, a hụwo Hawaii dị ka ihe atụ nke ihe ịga nke ọma. Hawadị Hawaii mere ka onye ọ bụla nọ na Steeti na ndị ọbịa nwee nchebe.
“Obi na-eru anyị ala ịdabere na akụkọ ọma a na Hawaii ma nwee isi ihe dị mkpa nke usoro Hawaii n'ime ihe anyị chọrọ maka Safer Tourism Seal na-eme ọtụtụ echiche. “
The Safer Tourism Seal (STS) na-ewuli na asambodo guzobere site na nyocha na nkwenye. Akara na-enye mmesi obi ike ndị ọzọ mgbe ị na-ejegharị n'oge oge ndị a na-ejighị n'aka. STS na enyere ndị na-aga ebe obibi na ndị na - eso ha aka aka site na nyocha ọtụtụ njirisi nke ọnọdụ dị ugbu a n'ọnọdụ azụmahịa gị.
The Safer Tourism Seal bụ naanị maka ndị otu Network Njem Nleta Ụwa. The Njem njem nlegharị anya dị nchebe maka ndị njem, ndị Ihe onyinye Heroes dịkwa maka onye ọ bụla.
Dị iche na nkwado Akara ma ọ bụ Stamp ndị ọzọ, World Tourism Network Safer Tourism Seal nwere ihe dị mfe achọrọ dabere na ọnụego ọgwụ mgbochi, ihe nyocha chọrọ, mkpuchi mkpuchi, iwu ngbasa mmekọrịta, yana ọnụọgụ ọrịa COVID tinyere nyocha onwe onye site na ndị na-achọ maka Nchekwa njem nlegharị anya.
WTN na-enye akara atọ:
GREEN Nchekwa njem nlegharị anya
dị maka ebe na ndị metụtara ya. Ọ gbadosiri ike na ntule nke aka gị yana anọ n'ime ihe ndị achọrọ kachasị maka ebe ị na-aga
1) 25% ịgba ọgwụ mgbochi nke ndị bi na gị
2) Nyocha COVID-19 na-adịghị mma ma ọ bụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa achọrọ maka ndị ọbịa mbata
3) Okwu ikpe gị nke ụbọchi asaa n’ime mmadụ 7 ọ bụla kwesiri ịbụ ihe n’erughị 100,000 na nkezi n’ụbọchị.
5) Mgbasa mmekọrịta mmadụ.
BLUE Safer Tourism Seal
Nyocha a dabere na nyocha gị na otu n'ime ihe ngosi 2 na-esonụ:
1) Ebe ị na-aga nwere ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi 50 + nke ndị bi na gị na ndị ọbịa gị ga-egosiputa ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke ma ọ bụ nyocha COVID-19 na-adịghị mma tupu ị rute na obodo gị, steeti, ma ọ bụ mpaghara gị na ọnụọgụ ụbọchị 7 gị na 100,000 ndị bi na-erughị 7 kwa ụbọchị; nkpuchi-ime na mmekọrịta mmadụ na ibe ya
2) MA Ọ B YourR Your ebe ị na-aga nwere ka enwee ọgwụ mgbochi% 60% NA ọnụọgụ ụbọchị asaa gị na 7 mmadụ niile na- erughị 100,000 na nkezi kwa ụbọchị
3) Mgbasa Ọha
Uhie njem nlegharị anya nke RED
Enyochala ma kwado ya:
Dabere na nyocha nke aka gị nke ndị ọkachamara nchekwa WTN na ndị otu WTN kwadoro ma ihe abụọ ndị a:
1) Ebe ị na-aga nwere ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi 70 +% nke ndị bi na gị
2) Ubochi abuo nke onu ogugu n’onye 7 bi na-erughi 100,000 kwa ubochi
Ndị otu ọkachamara ọkachamara WTN nwere ike ịhazigharị ihe achọrọ dabere na data na nnwale onwe ha.
Maka ozi ọzọ na Nchekwa njem nleta Njem, na itinye gaa www.safertourismseal.com